SEENAA BOONSAA KUDHAAMA TOKKUMMAAN AS GEENYEE; SEENAA SUMMII TOKKUMMAATTI TAHU DHALOOTA BORUU HIN DHAALCHIFNU! |
Home Afaan Oromoo SEENAA BOONSAA KUDHAAMA TOKKUMMAAN AS GEENYEE; SEENAA SUMMII TOKKUMMAATTI TAHU DHALOOTA BORUU HIN...
Caalaa Hayiluu Abaataa irraa, Fulbaana 27, 2019
Waan hardha keessa jirruuf, kaleessi fi dheengaddi waan taphatan qabu. Waan boru tahuuf jiruufimmoo kaleessi fi hardhi waan raacitan qabu. Oromoon waggoottaan hedduuf bittaa halagaa jalatti jilbiinfattee akka turuuf sababoota godhan keessaa gurguddoon:
– Humna waloon socho’uu fi qindaa’aa tahe dhabuu,
– Jaarraa keessa jiru waliin akka saba guddaa kanaatti waan isa oofu dhabuun akka warra isa bitaa tureetti guuttachuu dhabuu fi hunda caalaa immoo
– #Gantootaa fi of jaalatootta bara hundayyuu sabicharraa dhalatanii sabichatti dugda gatuun diina tajaajilan faa qabaachaa turuu seenaan nutti hima.
Haa tahuyyuu malee dhaloonni diroo fi biroorraa akka saaroo saaree, akkuma ”garaan haadhaa buburree” jedhan san inni sabicha gidirsuu fi rakkisu, inni sabichaaf dantaa hin qabneefi sabicha diinaf dabarsee kennaa ture akkuma turetti, qaqqaaliin ilmaan Oromoo gudeeda abbaaf safuu laatuu fi gadaameessa boraaftee bahetti suummii hin taane,kan booree guduunfatee booree baasuf halkuu guyyuu ifaaju hedduu Oromoon biqilcheet akka halleefuu bakka amma jirru kana geenye.
Akki as itti geenye waan barreeffama gabaabduu kanaan waliif ibsinu akka taanes hundi keenya ni hubanna. Ammoo akka laaftutti as akka hin geenyee fi wareegamni baafame hadhaawaa fi qaalii tahuu namuu jala muree beekuu qaba.
Kaleessa sabboontoonni Oromoo kaabaa hanga kibbaatti,bahaa hanga dhihaatti fi guutummaa Oromiyaa keessatti sagalee waliif tahuun waliif birmachuun diinasaa ija tokkoon laalee gaaffii wal fakkaataa,gaaffii abbaa biyyumaa isaa mirakaneeffachuuf waliin kufee ka’aa ture. As keessatti garuu hojiin eebbifamaa fi wareegamni qaaliin kuni yommuu Oromoota dantaa sabaaf jiraataniin kanfalamu, faallattimmoo waan egere (potentially) tokkummaa keenyatti gufuu tahan warri hojjataa turan lakoobsi hoonga hin qabu..
Sadoo dhuunfaa fi dhiba’ummaa matayyaa irraa kahuun jaarmiyaa Oromoo laaffisaa fi diigaa, gandaa fi amantiin Oromoo qaamonni unkuraa turan suduudaanis tahee kallatiijn qormaata akka sabaatti Oromoon hardha keessatti kufeef gaafatamoo dha. Saba tokkumaan diinaa isaa kokkee qabee of irraa gombisuuf wareegama hadhooftuu kanfalaa tureefi hanga dhumaatti deemuuf murteeffatee ture kaan afaan faajjeessee, kaanimmoo keessoo isaa diigee hardha Oromoon walakkaan ”bilisummaan qaba ” jedhee yommuu dhiichisu,inni kaanimmoo gabrummaa takkaahuu argee hin beekne keessa seenee, bahee galuu dhabee, egereen maatisaa fi naannoo isaa itti dukkanaa’ee yommuu golgoleeffamu inni iddoo biraa sagaleellee dhageessisuufin hafnaan waan taahee itti gammadu fakkaata.
Sirna Oromoo nyaataa tureefi gabrummaa jalatti uummata keenya hidhaa ture, warra sirnichaaf waardiyaa thauun Oromoo kolaasaa fi ajjeessaa ture keessaa namoonni sirnicha tursiisfachuuf afaan bareedaa fi madaa Oromoo irraa waan hooqaniif fakkaachun, akkasumas fedha saba keenyaa jechoota gaggaariidhaan dubbannaan isaan qabsaahotaa fi bilisoomsitoota tahuun (fakkeessuun, taasisuun) warri duraanuu Oromoo diigaa fi sadoo matayyaaf qabsoo Oromootti xannacha tahaa turan warra kana qabachuun egeree Oromoo dukkaneessan. Kallattii qabsoo Oromootti hurrii maran, saba keenya ni tamjeessan, waan qabatee dhiisu wallaalchisuun uummanni keenya akka bishaan gabateerraa tahe.
Qabsoon Oromoo waggoottan muraasa darban gamtaa fi murannoo fi murteeffannoo guutuun gooleelee oromiyaa hundaa kahee qabsoo finiinsaa ture hardha akkas tahuun hafnaan sagalee walii dhagahuuf fedha kan qabu hin fakkaatu. Tokkummaa saba dhiigni sarare, irbuu qabasaahota kaleessaa boolla tokkotti oromummaa fi tokkummaa Oromoo tiksuuf waareegamanii gatii dhabsiifame. Siyaasaa fi dantaa dhuunfaa akkasumas sadoo aangoon namaaf laattuufi jecha gamataa sabaa keenyaa diiganii, egeree saba caalaa faayidaa dhuunfaf Oromoo sakaalan.
#YaaOromoo, hardha wanti tahaa jiru isaa kaanif hiika dhabuu mala, isa kaanimmoo dhiiga boohichaa jiraachuu mala, kaanimmoo gammachiisuu mala. Garuu egere eenyumti keenyallee gaafatama seenaa jalaa bahuuf hin teenyu. Wanti hardha godhaa jirru boru seenaa tahuusaa namuu ni hubata, saba keenya Lixaa fi kibbatti dhumaa jiru irratti qumaarri siyaasaa fi qoosaan deemaa jiru boru gatii guddaa nu kanfalchiisuuf deema.
#Oromoo, dhaabbannee of haa ilaallu, Oromoo saba tokkummaan eenyummaa isaa bara dukkanaayyuu eeggatee as gahe warri kallattiin diiges tahee warri al kallattiin keessatti qooda qabaatee ykn warri osoa arguu callise hundi keenyayyuu gaafatma seenaa jala hin baanu. Hardhas yeroon isaa hin barfanne, gamtaan dhaabbannee saba keenya haa baraarru, tokkkummaa keenyaa ititee ture bakkatti haa deebisnu, gamtaa keenyaan waliin dhaabbnnee sagalee waliif haa taahu.
Seenaa boonsaa fi kudhaama tokkummaa hangafootaa fi qabsaahota keenyarraa dhaallee, nuti finni ammeen summii tokkumama Oromoo dhalatoota boruu dhaalchisuuf shira irraa haa dhaabbannun dhaamsa kiyya . Sabni keenya yeroo kam caalayyuu Yeroon waliin dhaabbachuu qabu amma.
Caalaa Hayiluu irraa
Previous articleOduu ODP: Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddi jiru itti fufee jira
Next articleየወለጋ ኦሮሞን ያስጨፈጨፈ 21ኛው ሽ kifile Zemen የኢትዮዽያ ብቸኛው ህትለር